DAAWO VIDEO: ”Ciidankii ka goosta Somaliland haddii la caayo inta hartayna Puntland ayay raacayaan‘‘ waxa yiri… | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DAAWO VIDEO: ”Ciidankii ka goosta Somaliland haddii la caayo inta hartayna Puntland...
DAAWO VIDEO: ”Ciidankii ka goosta Somaliland haddii la caayo inta hartayna Puntland ayay raacayaan‘‘ waxa yiri…
Hargeysa (Halqaran.com) – Siyaasi Cali Cantar oo ka mid ah masuuliyiinta Xisbiga Wadani oo Warbaahinta Kula hadlay magaalada Hargeysa, ayaa ka hadlay ciidamadii dhowaan ku biiray maamulka Puntland.
“Dadka Somaliland wixii ay wada lahaayeen Hoos ayay u socdaan, waxaa Xoogaystay Qabyaaladda, Dadkii waxay noqdeen wax dhintay, oo u baahan in loo Koriyo Caqli ahaan, Wadaniyad ahaan iyo Diin ahaanba, Arrimihii gudaha iyo Dibaddu meel adag ayay marayaan, inyar ayaa lacag Aruursanaysa, waxaa imaan doonta in la isla Burburo”. Ayuu yiri Siyaasi Cali Cantar.
Wuxuu kaloo sheegay, in Ciidamadii dhowaan ku biiray Puntland iyo Jawaabtii Xukuumadda Somaliland ka bixisay ayuu wuxuu yiri.
“Hadii aanay Dawladda maanta Ogolaan ciidanka lama soo hadal qaadi jirin, Wasiirkii Cadaalladu wakaas Caayaya Ciidamada, Inta kalana way Raacaysaa haddii Ciidankii tagaba la Caayo, Waa nasiib daro in maalinkasta ay Dawladdu Askarta ku gefto”
Ciidankii ka goostay Somaliland
haddii la caayo
inta kale Puntland ayay raacayaan